အဘယ်ကြောင့်တို့သည်ကျမ်းစာအမျိုးမျိုး? – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / အဘယ်ကြောင့်တို့သည်ကျမ်းစာအမျိုးမျိုး?
သိသိသာသာ, ဘာသာပြန်ကျမ်းကြောင့်ကွာခြား, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအခြေခံကျကွာခြားချက်ရှိပါတယ်, လွန်း, နှင့်သောကမျြးစာ၏ဖွဲ့စည်းမှုကပါဝင်ပတ်သက်, ဓမ်မဟောငျးကမျြးအတွက်အထူးသဖြင့်လက်ခံထားသောစာအုပ်များ.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ကက်သလစ်နှင့်အခြားခရစ်ယာန်များသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ထည့်သွင်းရန်စာအုပ်တွေပေါ်သဘောတူလေ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ထဲမှာခုနစျပါးစာအုပ်တွေရဲ့စစ်မှန်မှုကိုငြင်းခုံ ဓမ်မဟောငျးကမျြး ကက်သလစ်တို့ပါဝင်သည်ကြောင်း.
ဤရွေ့ကားစာအုပ်များ, ယင်းကိုခေါ် deuterocanonical (သို့မဟုတ် "ဒုတိယ canon" သည်) စာအုပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုအချိန်များအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့လို့. သို့သော်, ရောမရဲ့ကောင်စီနှင့်အတူစတင် 382 A.D., အရာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့် Damasus ငါ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ခေါ်ယူ, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကဤစာအုပ်၏တရားဝင်မှုနှင့်ထိုက်တန်လက်ခံခဲ့သည်, သည်အခြားခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်နှင့်မကျင့်စဉ်.
ပထမဦးဆုံး နှင့် ဒုတိယအချက်မှာမက္ကဘီး
၏ကဏ္ဍများ ဒံယလေက နှင့် ဧသတာ
အဆိုပါ deuterocanonical စာအုပ်တွေနာမည်ကြီးသောအာလေဇကို Canon တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်, အဆိုပါ၏ဂရိဗားရှင်း ဓမ်မဟောငျးကမျြး အကြားထုတ်လုပ် 250 နှင့် 100 B.C. ဤသည် canon အီဂျစ်ဖာရောဘုရငျတော်လမီ II ကို Philadelphus ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်ခုနစ်ဆယ်ဂျူးကျမ်းပြုဆရာကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, လက်ဇန္ဒြီးယား၏စာကြည့်တိုက်ထဲမှာထည့်သွင်းဘို့ Greek သို့ဘာသာပြန်ထားသောဂျူးဘာသာရဲ့အမွငျ့မွတျစာအုပ်များ၏စံချိန်စံညွှန်းမီစုဆောင်းခြင်းရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့သူ. ဤအခုနစ်ဆယ်ကျမ်းပြုဆရာကထုတ်လုပ်အဆိုပါ canon သူတို့၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ပြီးနောက်ပျတှားဂငျြ့အဖြစ်လူသိများခံရဖို့ရောက်လာပြီ ခုနှစ်ဆယ်, များအတွက်လက်တင်စကားလုံးက "ခုနစ်ဆယ်။ "
အဆိုပါပျတှားဂငျြ့ရှေးခေတ်ပါလက်စတိုင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားနှင့်သူ၏နောက်လိုက်များကပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်. တကယ်တော့, ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ထင်ရှားကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုးကား၏လွှမ်းမိုးသောအများစုကပျတှားဂငျြ့ကနေများမှာ.
ဝေဖန်သူများကထောက်ပြကြပါပြီ, သို့သော်, အဆိုပါ deuterocanonical စာအုပ်တွေဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ကိုးကားကြသည်မဟုတ်ကြောင်း, ထိုအခါမူကားနောက်တဖန် Non-ကက်သလစ်ကိုလက်ခံသောစာအုပ်များစွာကိုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်, ကဲ့သို့ တရားသူကြီးမှတ်စာ, ရာဇဝငျခြု၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်, Nehemiah, ဒေသနာ, ရှောလမုန်မင်း၏သီချင်း, မြည်တမ်းစကား, ဩဗဒိ, နှင့်အခြားသူများ. ထို့အပွငျ, ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုတိုက်ရိုက် deuterocanonical စာအုပ်တွေကိုကိုးကားပါဘူးလျှင်ပင်, ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောကျမ်းပိုဒ်၌သူတို့ကိုမှ alludes (အထူးသဖြင့်ပေါလု၏နှိုင်းယှဉ် ဟေဗြဲမှပေးစာ 11:35 နှင့် မက္ကဘီး၏ဒုတိယအစာအုပ် 7:29; လည်း မဿဲ 27:43 နှင့် ပညာသည်ပညာ 2:17-18; မဿဲ 6:14-15 နှင့် Sirach 28:2; မဿဲ 7:12 နှင့် Tobit 4:15; နှင့် တမန်တော်၏တမန်တော် 10:26 နှင့် ပညာသည်ပညာ 7:1).
အစောပိုင်းပရိုတက်စခေါင်းဆောင်များကပျတှားဂငျြ့ပယ်ချ, ကက်သလစ်ဓမ်မဟောငျးကမျြး, တစ်ဦး canon ၏မျက်နှာသာအတွက်ပါလက်စတိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်, သော deuterocanonical စာအုပ်တွေ omits. ဤသည် canon ပထမရာစု A.D. ၏အဆုံးကိုဦးတည် Jamnia များ၏ရွာများတွင်ရဗ်ဗိ၏အုပ်စုတစုကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်, နှစ်ရာမှသုံးနှစျအနောက်ပိုင်းတွင်ပျတှားဂငျြ့ထက်.
ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကက်သလစ်အယူဝါဒကိုထောကျပံ့ပေးသော deuterocanonicals အတွက်ကျမ်းပိုဒ်၏ပျတှားဂငျြ့ငြင်းပယ်ဖို့ပရို၏တည်ထောင်သူကအကျိုးရှိတွေ့ရှိခဲ့ပုံ. အထူးသ, သူတို့ကမှကန့်ကွက်ယူ မက္ကဘီး၏ဒုတိယအစာအုပ် 12:45-46, ရှေးဟောင်းယုဒလူတို့သေလွန်သောသူတို့သည်အဘို့ဆုတောင်းကွောငျးဖျောပွရာ.
ထူးခြား, မာတင်လူသာအဖြစ်ကောင်းစွာအယူဝါဒမြေပေါ်တွင်နယူး-ဓမ္မစာအုပ်တွေလက်တဆုပ်စာရှုတ်ချ၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကိုယူ. သူမထီမဲ့မွငျပွု ဂျိမ်း၏ပေးစာ, ဥပမာအားဖြင့်, "လူယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးတည်းအားဖြင့်အကျင့်ကိုကျင့်နှင့်မတို့ကအပြစ်လွတ်ကြောင်း" သူ့ရဲ့သင်ကြားမှုများအတွက် (2:24). ဖြည့်စွက်ကာ ဂျိမ်း, ပေးသောသူကောက်ရိုး၏ "တစ်ဦးဩဝါဒစာဟုခေါ်တွင်,"လူသာကိုလည်းပယ်ချ ပေတရု၏ဒုတိယအပေးစာ, ကို ဒုတိယအချက်မှာ နှင့် ယောဟန်၏တတိယပေးစာ, စိန့်ပေါလုရဲ့ ဟေဗြဲမှပေးစာ, နှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအုပ်.
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသည်သန့်ရှင်းသောသမ္မာကျမ်းစာရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသိအမှတျပွု, သူမအဖြစ်ကမှတ်မထားဘူးသော်လည်း ဖိနပ်အောက်ခံအသား အာဏာ, လူသာပြုသကဲ့သို့.
ကို Canon ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအောက်ပါ, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Damasus စိန့်ဂျရုမ်းပြန်တမ်း (ဃ. 420), သူ့ခတျေနှငျ့ဖြစ်ကောင်းအားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးသမ္မာကျမ်းစာပညာရှင်, ဒါကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာကိုဖတ်ရှုနိုင်နိုင်အောင် Latin သို့ကမျြးစာကိုဘာသာပြန်ဆို.1
ကမျြးစာကကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများအားဖြင့်အလယ်ခေတ်မှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်, သူတစ်ဦးအချိန်တွင်လက်ဖြင့်စာတစ်စောင်ကပြန်ထုတ်ပေး. ကမျြးစာ၏ကဏ္ဍများပထမဦးဆုံးအသျှင်စိန့် Bede အားဖြင့် English သို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြသည်, ကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်, အဋ္ဌရာစုအတွင်း.
ကမျြးစာ၏စာအုပ်များအတွက်အခန်းကြီးသို့ခွဲခြားခဲ့သည် 1207 စတီဖင် Langton အားဖြင့်, ကန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်. ပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်သမ်မာကမျြးန်းကျင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် 1452 ဂျိုဟန်နက်စ်ဂူတင်ဘာ့ဂ်တို့က, ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးအစားကက်သလစ်တီထွင်သူ. မူလရေးသားသူသို့မဟုတ် King James Version အတွက်ပြုသကဲ့သို့ဂူတင်ဘာ့ဂ်ရဲ့ကမျြးစာ deuterocanonical စာအုပ်တွေထည့်သွင်း 1611.
ကမျြးစာကိုကောင်းစွာလူသာ၏အချိန်မရောက်မှီအဂျာမန်နှင့်များစွာသောအခြားဘာသာစကားများသို့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်. တကယ်တော့, ကီဗင်အော်လင်းဂျွန်ဆင်သည်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်မှတ်ချက်ပြု, ကက်သလစ်အဘယ်ကြောင့်ပြုကြ?
"မဆိုကြင်နာ၏အသက်အကြီးဆုံးဂျာမန်စာရွက်စာတမ်း၌ပြစ်မှားမိကမျြးစာကိုတစ်ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည် 381 Ulfilas အမည်ရှိရဟန်းတစ်ပါးအားဖြင့်; သူ Gothic သို့ကြောင့်ထားသော, ဂျာမန်ပြန်ပြီးတော့ဘာအရာဖြစ်ပါသည်. သင်မကြာခဏမာတင်လူသာအသင်းတော်ရဲ့ဆုပ်ကိုင်ထံမှကမျြးစာကိုလွတ်မြောက်အောင်နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ငတ်မွတ်နေတဲ့ကလူကပေးကြဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့ကွောငျးကိုကွားသိ, သို့သော်သိသာဒဏ်ဍာရီင်. Ulfilas ကတည်းက, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဂျာမန်ဘာသာစကားကျမ်းစာများထက်ပိုအနှစ်တထောင်ရှိခဲ့ဖူး, အနည်းဆုံးနှစ်ဆယ်-One ပုံနှိပ်ဂျာမန် edition မှာ (Cardinal မျောက်လွှဲကျော်ရဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်) လူသာမီ။ " (ကက်သလစ်အဘယ်ကြောင့်ပြုကြ?, Ballantine စာအုပ်များ, 1995, p. 24, ဎ။)
အားလုံးခရစ်ယာန်တွေလိုပဲ, ကက်သလစ်သမ္မာကျမ်းစာပြန်ဆိုအတွက်လမ်းညွှန်မှုအဘို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အပေါ်သို့အားကိုး; အဆိုပါထူးခြားသောဥာဏ်နှင့်တကွ, သော်လည်း, ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်များ၏မော်တော်ယာဉ်မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်း (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 14:26 နှင့် 16:13). ဝိညာဉ်တော်သည်အတွက်ဘုရားကျောင်းရဲ့ Magisterium လမ်းညွှန် မှားယှငျးနိုငျ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွသမ္မာကျမ်း, သူ infallibly ကရေးသားအတွက်သန့်ရှင်းသောစာရေးဆရာများပဲ့ထိန်းသကဲ့သို့.
အတော်များများက Non-ကက်သလစ်ဘုရားသခငျ၏အခွင့်အာဏာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့အခွင့်အာဏာများစိတ်ကူးကြည့်ရှုလေ့, ဒါပေမယ့်ခရစ်တော်သည်ဘုရားကျောင်းစိတ်ချပါ, "သင်ကြားသောသူသည်ငါ့ကိုကြား, သငျတို့သပယ်ချသောသူမူကားငါ့ကိုပယ်, ငါ့ကိုငြင်းပယ်သောသူမူကားငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကိုပယ်ချ " (လုကာ 10:16). ဒါကြောင့်, ဘုရားသခငျ၏အခွင့်အာဏာတော်သည်အသင်းတော်၌အခွင့်အာဏာထဲကနေကွဲကွာမရနိုငျ. ခရစ်တော်သည်ဘုရားကျောင်းရဲ့အခွင့်အာဏာများအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤအခွင့်အာဏာအထံတော်မှကြွလာအဖြစ်ကအားလုံးကိုသူ့နောက်လိုက်များကအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စကားကိုနားထောငျရနျဖွစျသညျ.
အများအပြားကမျြးစာ၏အခွင့်အာဏာကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုပေမယ့်, ဒီကိစ္စကို၏အမှန်တရား, အများအပြားအဘို့အဘယ်သို့ကျမ်းစာကတစ်ဦးချင်းစီ၏ပုဂ္ဂလိကအနက်တို့အပေါ်မှာမူတည်.
Saint Peter သတိပေးခဲ့သည်, သို့သော်, "ကျမ်းစာ၌ပါသောအာအနာဂတ္တိတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနက်တစ်ဦးကိစ္စကြောင်း, အဘယ်သူမျှမအနာဂတ္တိအစဉ်အဆက်ယောက်ျား၏ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဖြင့် လာ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဒါပေမဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ယောက်ျား "ဘုရားသခင်ထံမှပြောသော (မိမိအကိုတွေ့မြင် ဒုတိယအပေးစာ 1:20-21; အလေးပေးဆက်ပြောသည်). ပတေရုသလည်းဆိုပါတယ်, ပေါလု၏စာမှကိုကိုးကားအတွက်, အခြို့သောအမှုအရာကိုနားလည်ရန်ခဲယဉ်းသူတို့ကိုရှိပါတယ် "အဲဒီ, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖျက်ဆီးသောမသိဘဲနဲ့မတည်မငြိမ်လှည့်ကွက်, သူတို့ကအခြားကျမ်းလုပ်ပေးအဖြစ်. သို့ဖြစ်., ချစ်သူတို့, ဒီရှေ့မ သိ., "သင်ဥပဒေမဲ့ယောက်ျား၏အမှားနှင့်အတူပါသွားသောသူမည်ကို စိုးရိမ်. သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်တည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးရှုံး (ထို့အပြင်ပေတရု၏ထဲမှာ ဒုတိယအပေးစာ 3:16-17).
အဲဒီအကြောင်းကြောင့်, ကက်သလစ်နီးပါး-2000 နှစ်ကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်, အနက်နှင့်နားလည်မှုတသမတ်တည်းအစဉ်အလာ.
"ရောမအင်ပါယာဥရောပမှာဆက်ခဲ့ရတယ်နေစဉ်, လကျတငျလျှာ၌ကျမ်းစာဖတ်, သောအင်ပါယာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာစကားခဲ့သည်, နေရာတိုင်းနိုင်ကြ,"ဟုအဆိုပါသိက္ခာချားလ်စ်ဘာ့, non-ကက်သလစ်, အသိအမှတ်ပြု (အတွက် "ကျမ်းစာ" Theological အဘိဓါန်; ပက်ထရစ်က F. အိုဟဲ, လူသာအကြောင်းအချက်အလက်, Rev. ed ။, Rockf သို့မဟုတ် d, အီလီနွိုက်: Tan ကစာအုပ်များနှင့်ထုတ်ဝေသူများ, Inc က, 1987, p. 182). ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Damasus Latin သို့မျြးစာကိုဘာသာပြန်ခဲ့, သူ့ခတျေ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာစကား, ခေတ်ပြိုင်ခရစ်ယာန်များသည်တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်–ငါတို့လို–အင်တာနက်ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါကမျြးစာကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ: ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှလူအတော်များများကသူတို့ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ,. ↩